काभ्रेमा मिर्गाैला तस्करी : रोकिएकै हो ? « रिपोर्टर्स नेपाल
प्रकाशित मिति : 2021 March 30, 12:04 pm
– राजकुमार पराजुली, काभ्रेपलाञ्चोक, १७ चैत: ‘बैंक अफ किड्नी’का रूपमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बदनाम कमाएको काभ्रेपलाञ्चोकमा करिब तीन वर्षदेखि मिर्गाैला तस्करीको घटना बाहिर आएको छैन । कोरोना सन्त्रासका बीच तस्करी नभएको विश्वास गरिए पनि त्यसअघि करिब एक वर्ष १० महिनाको अवधिमा समेत मिर्गाैला तस्करीका घटना बाहिर आएनन् । के अब काभ्रेपलाञ्चोकमा मिर्गाैला तस्करी रोकिएकै हो ?
कानूनमा मिर्गाैला दान गर्न आफन्त हुनुपर्ने उल्लेख छ । गैरकानूनीरूपमा मिर्गाैला बिक्री गराए मानव बेचविखन तथा ओसारपसार ऐन, २०६४ अन्तर्गत १० वर्ष कैद र रु दुई देखि पाँच लाखसम्म जरिवाना र सजाय हुनेछ । पीडकलाई गरिएको जरिवानामध्ये आधा रकम भने पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइदिने कानूनी व्यवस्था छ ।-रासस/File photo